GTK 4.0 yakatoburitswa uye inouya nekuvandudzwa kweOpenGL uye Vulkan uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memakore mana ekuvandudza pakupedzisira kuburitswa kwebazi idzva reGTK 4.0 kwakaziviswa, iri kuvandudzwa sechikamu cheyambiro nyowani yekuyedza inoedza kupa vanogadzira application neIPA yakagadzikana uye inoenderana kwemakore akati wandei, iyo inogona kushandiswa pasina kutya kuita redo application mwedzi mitanhatu yega yega nekuda kwekuchinja kweAPI mune inotevera GTK. bazi.
Iyo GTK 4 bazi yakaziviswa kugadzikana uye ichashandiswa mune inotevera GNOME 4.0 kuburitswa. Panguva imwecheteyo, zvakaziviswa kuti rutsigiro rwebazi reGTK 2 rwakamiswa, mumazuva mashoma ayo kuburitswa kwazvino kurongerwa kuburitswa, nepo rutsigiro rweGTK 3 bazi rucharamba richienderera mberi mune ramangwana rinotaridzika.
Main matsva maficha eGTK 4.0
Pane shanduko dzinobuda pabazi idzva iri, tinogona kuzviwana nzira yakarambidzwa yekugadzira yakaitwa, mune iyo nzvimbo uye saizi yezvinhu zvevana zvinotariswa zvichibva padaro kumativi uye saizi yezvimwe zvinhu.
kunze kwaizvozvo akawedzera module yekupa yakavakirwa paVulkan mifananidzo API, iyo inoshandisa shader kune akawanda masisitimu-akasimba CSS zvinhu zvinoshandiswa muGTK widgets uye GSK yakabatanidzwa (GTK Chiitiko Kit) iine mifananidzo yemifananidzo inopa kugona kuburikidza neOverGL uye Vulkan.
Sangano remumiriri rakagadziridzwa: panzvimbo pekuzvitumira kubhafa, ikozvino modhi inoenderana nekupa node inoshandiswa, mune izvo zvabuda zvakarongeka muchimiro chepamusoro-chikamu mashandiro emuti, yakagadziriswa zvakanaka neGPU ichishandisa OpenGL uye Vulkan.
Isu tinogona zvakare kuona izvo muGTK 4.0 chiitiko chemazuva ano chekuendesa chinokurudzirwa, izvo zvinoita kuti zvive nyore kupfuura subwindow kana uchifambisa zviitiko zvekupinza. Iko kudiwa kwekushandisa modhi nyowani kwakabatana nekunyanya kushandiswa kwekuratidzira mhedzisiro, iyo inofanirwa kupihwa pasina kushandura marongero ezvinhu zvinoonekwa uye, nekudaro, pasina subwindow.
GDK API yakagadziridzwa kutora mukana weiyo Wayland protocol uye dzakabatana pfungwa. Iwo X11 uye Wayland zvine chekuita nemabasa akaendeswa kuti apatsanure kumashure uye rakakura API kuchenesa kwaitwa, kusanganisira kubviswa kweGtkMenu, GtkMenuBar uye GtkToolbar makirasi, panzvimbo iyo iyo GMenu uye popover sarudzo dzinokurudzirwa.
Panguva yekuvandudza widget, chinhu chitsva cheGtkLayoutManager chinounzwa pamwe nekumisikidza sisitimu yekudzora kurongeka kwezvinhu zvichibva pahukuru hwenzvimbo inoonekwa uye kuti GtkLayoutManager yakatsiva zvivakwa zvemwana mumidziyo yeGTK yakaita seGtkBox neGtkGrid.
Kirasi nyowani yeGtkNative yakawedzerwa kumawadhi ayo ane yavo yekuratidzira pamusoro uye anokwanisa kushanda zvakasiyana padanho rekutanga, pasina kubatanidzwa kune makuru majeti.
Widgets matsva akawedzerwa anosanganisira GtkPicture, GtkText, GtkPasswordEntry, GtkListView, GtkGridView, GtkColumnView, pamwe newidget kuratidza Emoji.
Iyo nyowani yekubvisa rukoko, GdkPaintable, yakawedzerwa iyo inoshandura zvinhu zvinogona kudhonzwa chero kupi uye kune chero saizi, pasina kuenzanisa magadzirirwo materu.
Broadway backend yakanyorwa zvekare kubvumira kupihwa kweGTK raibhurari kuburitsa muwebhu browser browser.
Iyo API inoenderana nekudhonza uye kudonhedza mashandiro yakagadzirwazve, kusanganisira izvo zvakarongerwa zvakasiyana GdkDrag neGdkDrop zvinhu.
Kuitiswa kwekutanga kweAccessibility API kune vanhu vakaremara kwakabviswa uye vhezheni nyowani yakavakirwa pane iyo ARIA kududzirwa uye iyo GtkAccessible widget yakurudzirwa.
Wakawedzera rutsigiro rwemavara anochinjika
GtkTreeView widget inoshandisa kugona kugadzirisa maseru.
Wakawedzera rutsigiro rwekuwedzera kupuruzira uye kusefa kuGtkFilterListModel uye GtkSortListModel.
Wakawedzera nyowani GDK backend ye macOS.
GtkTextView uye mamwe majeti ekuisa ane akavakirwa-mukati ekugadzirisa stack.
ZveWindows, itsva ANGLE-based GDK inopa backend inopihwa, yepakati rukoko yekushandura mafoni kubva kuOverGL ES kuenda OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL, uye Vulkan.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GTK 4.0 yakatoburitswa uye inouya nekuvandudzwa kweOpenGL uye Vulkan uye nezvimwe